Ciidamo cusub oo Al-Shabaab la dagaalama Somalia loo soo dirayo | Xaqiiqonews
Ciidamo cusub oo Al-Shabaab la dagaalama Somalia loo soo dirayo
Mid ka mid ah Dowladaha taageera Soomaaliya ayaa sheegtay inay ciidamo dheeraad ah usoo direyso Soomaaliya xlli ciidmada ugu badan ee AMISOM ay ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo dagaal kula jira Al-shabaab .
Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri Musaveni ayaa cadeeyay inuu ciidamo dheeraad ah usoo dirayo Soomaaliya si uu kordhiyo ciidamada Soomaaliya ka jooga si dagaalka Al-shabab loo sii xoojiyo.
Wuxuu sheegay in dawladiisu ay kordhinayso ciidamada Soomaaliya ka jooga waxaana uu ujeedka ku sheegay in la xoojinayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabab iyo sidii amniga loo adkeyn lahaa.
Madaxweyne Musaveni wuxuu tilmaamay in xilligaan ay Soomaaliya ay wajahayso xaalad adag oo dhanka amaanka ah sidaa darteed ay kordhinayaan ciidamada Soomaaliya ka jooga kuwaasoo ka shaqayn doona gobolada dalka.
Ciidamadaan dheeraadka ah waxaa la sheegyaa inay ka qeyb qaadan doonaan sugida amaanka magaalada Muqdisho iyo ka hor tagista weeraro ay Al-Shabab ka sameeyaan magaalooyinka qaar ee dalka.